Mediam-bahoaka · Global Voices teny Malagasy
Janoary 2022 26 Lahatsoratra
Tantara misongadina mikasika ny Mediam-bahoaka
Amerika Latina43 minitra izay
Azia Afovoany sy Kaokazy4 andro izay
Amerika Latina5 andro izay
Tantara mikasika ny Mediam-bahoaka
Tao anatin'ny taona maro taorian'ny niakarany teo amin'ny fitondrana, nifehy tsikelikely ny ankamaroan'ny sehatry ny zavakanto sy kolontsaina tao amin'ny firenena ny Antokon’ny filoha Erdoğan Rariny sy Fampandrosoana (AKP).
Tendrombohitra rako-dranomandry, lohasaha kanto mahafinaritra, trano voarakotra fotsy — izany no topimason'ny ririnina ao amin'ny faritra Kashmir ao India, zarain'ny mpikirakira Twitter.9
"Andramako ny mamorona izay mety hisian'ny tsingevana eo anelanelan'ireo toetra mifanohitra izay hampiditra ara-pihetseham-po sy ara-tsaina an'ireo mpijery sy hanao izay hametrahan'izy ireo fanontaniana"
Noho ny fanomezan'i Shina anaram-baovao ny toerana miisa 15 any amin'ny fanjakana avaratra atsinanana Arunachal Pradesh dia namaly tao amin'ny Twitter tamin'ny fanomezana anaran-toerana indiana ireo tanàna shinoa ny Indiana.
Tondradrano be ao Indônezia, mihoatra ny 30.000 ny olona tao amin'ny faritr'i Sumatra no nafindra toerana
Tontolo_iainana 5 andro izay
Taorian'ny herinandro nisian'ny orambe nivatravatra tao amin'ny nosy Sumatra ao Indônezia, mihoatra ny 30.000 ny olona nafindra toerana ary zaza telo no maty noho ny fiakaran'ny rano tampoka
Azia Atsimo 5 andro izay
Efa ho 200 taona ny nametrahana ny fisian'ny Calao menapiny tenda tany Nepal izay voasokajy ho "marefo". Tamin'ny 1829 no nahitana azy farany teto amin'ny firenena.
Karaiba 6 andro izay
Nodimandry daholo ireo zokiny indrindra mpiangaly calypso maredona, mpiangaly soca parang, ary ilay mpisava làlan'ny gadona Kaiso Jazz, namela an'i Trinidad&Tobago ho mahantra.
Taratasim-baovao 6 andro izay
Mankalaza ny fiteny indizeny, manambatra ny hery ho an'ny tontolo tsaratsara kokoa, sy ny maro hafa!
Amerika Latina 1 herinandro izay
Resy lahatra amin'ny maha-zavadehibe ny fifandraisana vokarina avy amin'ny tany kasainy ho afaka ireo mpanao gazety indizeny toa an'i José Abelardo Liz.
Eoropa Afovoany & Atsinanana 1 herinandro izay
Nampiasaina hampiroboroboana ireo fantsona mpomba ny governemanta ireo lahatsary fohy, izay manasongadina ireo mpikambana ao amin'ny mpanohitra sy ireo mpanao gazety mahaleo tena nogadrain'ny fitondrana Lukashenka izay toa hita fa fiaiken-keloka natao tao anatin'ny fanerena.